Minisitry ny Fizahantany “Ilaina ny fandriampahalemana” | NewsMada
Minisitry ny Fizahantany “Ilaina ny fandriampahalemana”
Par Taratra sur 09/07/2018
« Ilaina ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fandraisana andraikitry ny rehetra momba ny tsy fandriampahalemana satria misy akony lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny fizahantany izany”, hoy ny minisitry ny Fizahantany, Razafitsiandraofa Brunelle ny asabotsy teo tany Ambatondrazaka. Nanatrika ny « Festival tonta Santabary » andiany voalohany, nokarakarain’ny Ofisim-paritry ny fizahantany ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro (Ortalma), mankalaza ny faha-10 taona nijoroany ny tenany. Ny fitokanana ny fotodrafitrasan’ny Ortalma ary ny trano fandraisam-bahiny vaovao vokatry ny fampiasam-bolan’ny mpandraharaha Malagasy tanteraka. Navotrany fa tokony hitodihana mandrakariva ny fampivelarana ny sehatry ny fizahantany. Anisan’ny singa lehibe mampidi-bola ho an’ny firenena ary hahazoan’ny rehetra tombony raha mandeha tsara araka ny tokony ho izy », hoy ihany ny minisitra.
Tsiahivina fa natao hanatsarana sy hampiroboroboana ny fizahantany any an-toeran ny fotodrafitras vaovao an’ny Ortalma. Tanjona ny hanentanana ny mponina momba ny tombotsoa ho entin’ny fizahantany eo amin’ny fampitomboana ny harin-karena sy ny farim-piainan’izy ireo. Nampirisihin’ny minisitra koa ny mpandraharaha mba hisehatra eo amin’ny fizahantany.
Etsy andaniny, notsidihina tamin’izany ny fahirin’Antsirika, toeram-pizahantany ezahan’ny ministera fohazina indray amin’izao fotoana izao. Nentaniny tamin’izany ireo vondron’olona ifotony, mitantana ity toerana ity mba handray an-tanana mikasika ny fanatsarana ny farihy.